Tanjona ny hanamafisana ny traikefan’ireo mpampianatra teny Anglisy eto Madagasikara ary ny hanomezana azy ireo ny toromarika azy mahakasika ny fivoaran’ny teny izay entina mampianatra. Maro amin’ireo mpampianatra teny Anglisy mantsy no tsy maharaka intsony ny fivoaran’ny teny izay hampianarina. Izany no antony nikarakaran’ny Masoivoho sy ny departemanta Amerikanina zaikabe izay entina hanampiana ireo mpampianatra teny Anglisy mba hampitombo ny fahaizana sy ny fifehezana ny taranja ampianarin’izy ireo. Anisan’ny horesahina mandritra ny fiofanana ny fampiroborobona sy ny fanatsarana ny fandaharam-pianarana teny Anglisy vaovao ho an’ireo Lisea eto Madagasikara. Tsy mijanona amin’ny teny Anglisy ihany fa mivelatra amin’ny fahaiza-manao izay mety ilain’ny ankizy sy ny tanora mba hahafahany miatrika ny sehatry ny asa any aoriana ihany koa ny fampiofanana omena ireo mpampianatra. Haharitra roa andro ity zaikabe ity ary mpampianatra teny Anglisy avy amin’ny fanjakana sy ny sekoly tsy miankina manerana an’i Madagasikara no manaraka ny fiofanana. Marihina fa ireo nivoaka avy tamin’ny sekoly manofana ho mpampianatra (ENS) ihany no voaantso aloha tamin’izao fiofanana izao.